Shiinaha 5mm Double core sanka silig Factory, Soosaarayaasha Oo CE - Technology Daahirinta (Zhejiang) Co., Ltd.
Hoyga > Silig sanka > N95 silig sanka > 5mm silig laba geesle sanka ah
Our 5mm silig core sanka double ayaa si isku laablaaban loogu dhuftay 10 jeer oo aan kala jabin. Waxay ka gudubtay heerka shahaadada caalamiga ah ee SGS waxayna leedahay ROHS ilaalinta deegaanka, waxay gaaraysaa sun aan sun ahayn, iska caabin laabaya iwm.
Hordhaca Wax soo saarka ee siligga sanka laba geesoodka ah ee 5mm
1.Waa silsiladda laba geesoodka ah ee sanka laga sameeyo waxay ka kooban tahay 2pieces oo ah silig bir ah 0.45-0.8mm iyo xarunta PP. Sababtoo ah birta gudaha ee birta, waxay leedahay saameyn hagaajin fiican. Marka la barbardhigo hal xudunta iyo sanka oo dhan, sanka laba-geeslaha ayaa leh qaab fiican.
2. 5mm silig laba gees leh oo sanka ah ayaa lawareejin karaa360 darajo, si qaldan u maroojin, saameyn qaabeyn wanaagsan.
2.ProductParameter (faahfaahinta) ee 5mm silig corenose double
Feature-soo-saarka iyo Codsiga ee siligga sanka laba geesoodka 5mm
The siligga sanka laba geesoodka ah ee "The5mm double" oo aan soo saarnay kama soo baxo khadka oo ma leh xarig, waxaa si ballaaran loogu adeegsadaa maaskaro N95.
Faahfaahinta wax soo saarka ee siligga sanka laba geesoodka ah ee 5mm
Shahaadada Wax soo saarka ee5mm silig sanka laba gees leh
6.Geli, Rarid iyo u adeegidba5mm silig sanka laba gees leh
We will provide you with 7 * 24 hours follow-up service and technical support when you buy 5mm silig sanka laba gees leh of our company, so that you can have no worries after sales.
J: cilad-darrada buundada sanka ayaa sabab u ah xakamaynta heerkulka aan habboonayn ee habka wax soo saarka.Macaaladda ay soo saarto shirkaddayda silig laba-gees leh ayaa loo rogi karaa 360 digrii, wixii qalloociyana ma beddelayso hoos u dhigidda.
J: waxaa jira xayawaan rabaayad ah, PE iyo PP oo loogu talagay buundada sanka ee maaskaro. Soosaarayaasha kaladuwan waxay sameeyaan agab kaladuwan Midda guud waa polypropylene hydrocarbon resin (PP). Nooca noocan oo kale ah iyo silig birta ah ayaa foorara isla markaana qaabeela ficilka xoogga dibadda, kaas oo sii wadi kara waxqabadka wanaagsan ee jira.
4. S: Immisa tan oo buundo ah ooone ah ayaad soo saari kartaa hal maalin?